Yevhiki vhiki menyu neThermomix - Gadzirira madhishi ako ezuva nezuva | ThermoRecipes
Chero rubatsiro rwunogamuchirwa uye zvakatonyanya kana rwuri rwekurerutsa basa mukicheni, pamwe nekugadzirira kwedu kwemazuva ese zvinonaka. Mune ino nzvimbo unogona kunakidzwa ne vhiki yevhiki, kwauchanakidzwa nemazano akanakisa nezve kugadzirira kwemaresipi evhiki rega rega. Nzira yakasarudzika yekuronga hupenyu mukicheni pasina kuita kuti hupenyu huome zvakanyanya. Recipes kwezuva rega rega revhiki, ne zvigadzirwa, matipi uye gadziriroNenzira iyi, basa redu mukicheni richagadziriswa. Saka kana izvo zvauri kutsvaga zviri mazano emamenyu ako evhiki, iwe uri mune yakakwana enclave.
Isu tatova nemenu yevhiki 26 ya2022 yakagadzirira. Inouya neakawanda mabikirwo kuitira kuti usapererwe nemazano ekugadzirira kudya kwemasikati uye kudya kwemanheru kubva munaJune 27 kusvika July 3.
Kunenge pasina kuzviziva, tinopinda muna Chikunguru, mwedzi unopisa par excellence uye umo iyo vacations, kunyanya kune vadiki vari mumba.
Saka hapana sarudzo kunze kwekubvisa guruva kubva pakubika kufefetesa, kupfava uye kuri nyore kwazvo mubhuku reresipi.
Menyu yedu inogara ichibatanidza mapoka ose ezvokudya kunyangwe isu takaagadzirisa kuti tikwanise kugadzirira mabikirwo anotonhora.
Isu takatogadzirisa iyo nyemba, kuti tine ivo vanobatanidzwa nendiro dzakawanda dzine simba dzakadai sezvimedu, uye dzakashandura kuva zvokudya zvinonaka, hummus uye saladi ... unofungei nezvepfungwa?
NeChitatu, China neChishanu variko akasiyana madhishi. Iwo mazano nekuti mune imwe resipi une mapuroteni, makabhohaidhiretsi uye mafuta. Zvichienderana nebumbiro remitemo yako, zvinogona kunge zvisingakukwanire.Kana zvakadaro, unokwanisa kuzviperekedza nekudya kunovaka muviri semapâté, asi chenjera… usapfurikidze nechingwa.
9 anokurumidza patés muThermomix
%%excerpt%%9 mapate anoyevedza aunogona kugadzira kumba uye neThermomix yako mumaminetsi mashoma. Iwe uchashamisa vaenzi vako.
Chipiri chekudya kwemanheru tine a zvinonaka burgers nesalmon iyo iwe yaunogona kutsiva chero yeiyi kuunganidzwa.
9 minwe-kunanzva burger mapepa
NeChina tichagadzira zvimwe akakanyiwa mazai izvo zviri nyore uye zvakapfuma. Isu tinokurudzira iyo vhezheni ine anchovies asi iwe unogona kuedza chero eaya mabikirwo:
9 yakashatiswa mazai evha kuti unakirwe nezhizha
Muchiunganidzo ichi mapfumbamwe akabikwa mazai emazai iwe unowana zvirinyore mazano kuti unakirwe muzhizha uye uwane zvakanyanya kubva kune yako Thermomix.
Menyu vhiki 26 ye2022
Gazpacho ine cherries
Iyo muchero vhezheni yechinyakare gazpacho. Hutano, iine ruvara rwakatsvuka rwakatsvuka uye dhishi rinozorodza, rakanakira kudzima kupisa kwezhizha.
Mazai akatswanywa ane zucchini uye tuna
Iyi zucchini uye tuna scramble iri nyore sezvo iri muto. Iresipi yakapusa iyo iwe yauchange wagadzirira mumaminitsi gumi neshanu neThermomix yako.
Caramelized hanyanisi hummus
Caramelized onion hummus inongova inonaka. Zviri nyore, zvinonaka uye zvakakwana kuperekedza miriwo kana toast.
Chingwa chisina kuviriswa
Dzimwe nguva zviri nyore kugadzirira chingwa kumba pane kuenda kunotenga. Chanhasi hachina mbiriso uye mumaawa maviri tinenge tagadzirira.
Yakakangwa pepper saladhi
Iyo yakagochwa mhiripiri saradhi ndiyo chishongo chedu gastronomy yakavakirwa pamatsvuku mhiripiri, gariki uye mazai akabikwa.
Couscous nemiriwo uye nhokwe
Couscous ane miriwo uye chickpeas ndeye yakakwana kwazvo nzira iyo inogona kuunzwa nenzira dzakasiyana asi nguva dzose iine imwechete inonaka mhedzisiro.
Kirimu inotonhora yeasparagus uye jongwe
Nekirimu ino inotonhora yeasparagus uye jongwe iwe uchanakidzwa, mumaminetsi mashoma, inonaka, yakapusa uye yekutanga chaiyo kosi yekutanga.
Salmon burgers ine mango muto
Mavambo matsva salmon burgers achiperekedzwa neinotapira uye yakasviba mango sosi iyo ichaita kuti iwe ukunde pakati pehama dzako
Bhinzi nyowani uye cod saladi
Bhinzi nyowani uye cod saradhi yakanakira zhizha. Hutano, hutano, nyore uye akagadzirira mune isingasviki maminetsi gumi. Yakakwana kutora kumahombekombe!
Karoti uye kolifulawa inofamba
Karoti uye kolifulawa puddings inzira inonakidza uye yepakutanga yekuti vana vadye zvakanaka sezvo pamusoro pemiriwo vane mukaka nemazai.
Tostas ine marinated huku escalopes
Yakakwana nzira yekubika kwemanheru neshamwari. Regai vakubatsire nekuunganidza idzi marinated huku schnitzel toast. Imi mose muchanakidzwa !!
Salată de boeuf, iyo Romanian-style yekuRussia saladi, inonaka uye inonaka shanduro ine nyama yemombe.
Muriwo papillote uye mashanu masosi
Inonaka inonaka uye ine hutano yemuriwo papillote nemashizha ayo mashanu anozoita kuti inake
Mazai akaiswa ne tuna uye anchovies
Iyo iri nyore nyore yekutanga kana yekufadza kuita. Aya mazai akaomeswa ane tuna, anchovies, mayonnaise uye iyo inonhuhwirira miriwo yatinoda zvakanyanya.
Neiyi pasta saradhi unogona kunakidzwa mangwanani ako pamhenderekedzo uchiziva kuti chikafu chako chichava chakagadzirira kana wasvika kumba.
Piadina putira nesipinashi, ham uye ricotta
Uye kwanhasi mamwe mapiyadhi akareruka uye anonaka, asi panguva ino muchimiro chekuputira chakazara nesipinashi, ham uye ...
Yakarungwa chickpea snack
Neichi chine hutano uye chakagadzirwa chinonhuhwirwa chickpea snack zvichave nyore kwauri kuti udye kudya kwakasiyana siyana pasina kurega zvekudya.
Pate yemuriwo inogadzirwa nemazucchini akagochwa, tahini pasta uye muto wemandimu. Inogona kupihwa nemakona emakona kana necrudité yemiriwo.
Creamy nhema mupunga ne cuttlefish uye prawns
Mucheka mutema wakasarudzika necuttlefish uye shrimp, ine huchi hunyanzvi hwatinokudzidzisa iwe kubika neiyi nzira yakagadzirirwa Thermomix. Uri kutarisa kushamisika here?
Natural matomatisi anonyudza
Sauce yekuperekedza machipisi kana nachos, inogadzirwa neyemhando nyanya. Chikafu chinokurumidza kugadzirira neyedu Thermomix.
Cutlets yakazara neapuro uye bhuruu chizi
Inonaka yetapuro yenguruve yakarongedzwa neapuro puru uye bhuruu chizi, izere nekuravira. Kurumidza uye nyore kugadzirira. Yakanaka sekosi yechipiri.
Prawn uye pear cocktail
Isu tinokuratidza maitiro ekugadzira prawn, crab uye pear cocktail, ichiperekedzwa nechinonaka chinonaka checocktail nemuto uri nyore weThermomix.
Fideuá ine aubergine uye mbudzi chizi
Fideuá yakasiyana, yakagadzirwa neabergine uye mbudzi chizi. Yakanaka kusiya yakagadzirirwa pamberi kana kutakura mune tupperware.
Ratatouille chikafu chevhegan chinobva kuFrance. Inogona kushandiswa sekushongedzwa kana yega, nechingwa.
Nemabhanzi aya unogona kugadzira mini sandwiches. Izvo zvinogadzirwa nemuto wakasviba asi zvinogona zvakare kugadzirwa nembiriso yemubiki.
10 akareruka mapikicha ane isingasvike 150 kcal
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 7 maawa .
Heino kuunganidzwa kwawanga wakamirira ... 10 akareruka mabikirwo ane isingasviki 150 kcal kuitira kuti unakirwe ...
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 1 zuva .
Isu tatova nemenu yevhiki 26 ya2022 yakagadzirira. Inouya neakawanda ekubika kuitira kuti…
Menyu vhiki 25 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 1 vhiki .
Chikumi arikupfuura nekumhanya kuzere, saka ngatishandisei zvakanyanya nguva nesvondo rino 25 menyu...
Menyu vhiki 24 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita Mavhiki e2 .
Vhiki 24 menyu ye2022 imenyu yakareruka zvekuti, kubva munaChikumi 13 kusvika 19, tinozvichengeta ...
Menyu vhiki 23 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita Mavhiki e3 .
Menyu vhiki 23 ye2022 yakagadzirira kuti iwe unakirwe, kubva Chikumi 6 kusvika 12, nemabikirwo ...
Menyu vhiki 22 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita Mavhiki e4 .
Menyu yevhiki 22 ya2022 inouya yakarongedzerwa nemazano matsva ekuonekana naMay uye kugamuchira…
Menyu vhiki 21 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 1 mwedzi .
Hapana mazano ekudya kwemasikati uye kudya kwevhiki rinouya? Tarisa uone menyu vhiki 21 ye…
Menyu vhiki 20 ye2022
Menyu yevhiki 20 ya2022 yasvika. Chikumbiro chizere nemazano ari nyore ekudya kwemasikati uye kudya kwemanheru...
Menyu vhiki 19 ye2022
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 2 mwedzi .
Menyu yevhiki 19 izere nezvikumbiro kuti usapererwe nemazano uye unogona kugadzirira iyo…
10 yakapusa uye inonaka bechamel sosi
Iwe uchada chirevo chedu nhasi. Muunganidzwa une gumi ari nyore uye anonaka bechamel sosi…
Menyu vhiki 18 ye2022
Menyu yevhiki 18 yakagadzirira nekudya kwemasikati uye kudya kwemanheru kwemazuva 2 kusvika…
Chinyakare miriwo puree
Triple puree yevana